Haddii aad dhibsaneysid xaaladaha bulshonimo ee shaqada ama aadan is hubin marka laga hadlayo waxyaabaha bulsho- iyo dhimir ahaan leesaga baahanyahay goobta shaqada, caawimaad ayaad naga heli kartaa.
Sida aan dareemyno, aan shaqada isugu faraxsannahay waxaa loogu yeeraa dhimirka-iyo bulshonimada suuqa shaqada. Psykosocialt anpassningsstöd waxay kuu suurta gelineysaa in aad takhasuslayaasheenna si wadajir ah madaxda ugala hadashid duruufaha goobta shaqada. Xitaa shaqabixiyahaagu wuu heli kartaa taageero. Ulajeeddadu waa in aad heshaan xalal fiicfiican si aad isugu qanacdaan iyo in aad ammaan shaqada ku dareentid.
Muddo sanad ah ayaad taas gudeheeda ku heli kartaa taageero.
Taageerada bulsho- iyo dhimir ahaaneed waa taageero loogu tala galay adigaaga haysta shaqada ama tababar shaqo, aanna u aragno in aad u baahantihid taageerada noocaas ah. Waxaad u baahantahay in aad shaqadoon ahaan nooga ag qorantihid.
Waa annaga cidda qiimeynta ku sameyneysa in taageero la xiriirta waafajinta xagga bulsho-iyo dhimir ahaantu ay kugu habboontahay. Waxaan wax ka hubsaneynaa xagga shaqabixiyahaaga, waxaana ballan la dhiganeynaa mid ka mid ah takhasuslayaasheenna.
Adiga iyo takhasuslaha, cilminafsiyahan ama la taliye xagga arrimaha bulshada, ayaa isla eegaya sida duruufaha la xiriira bulshonimada- iyo dhimirku ay u saameynayaan hawlkarnimada xagga shaqada. Waxay badanaa taasi ku saabsanaan kartaa waxyaabo sida u dulqaadashada cadaadiska, wada shaqeynta, karaanka xagga wada xiriirka iyo habka qaabilaadda.
Shaqabixiyahaagu waa in uu dabadeed tilmaamo jawiga bulsho-iyo dhimir ee goobta shaqada.
Adiga iyo shaqabixiyahaaga ayaa qorsheynaya waxyaabaha loo baahanyahay in wax la waafajiyo si aad si fudud shaqada ugu bixi kartid.
Shaqaaleysiin taageero leh